Stadin osaamiskeskus wuxuu ashkhaasta reer Helsinki ee shaqo raadiska ahi u furay adeeg shakhsiga lagu hagayo sida shaqo loo helo | Helsingin kaupunki
Stadin osaamiskeskus wuxuu ashkhaasta reer Helsinki ee shaqo raadiska ahi u furay adeeg shakhsiga lagu hagayo sida shaqo loo helo
Adeegga waxaa si wadajir ah usoo diyaariyay xafiiska shaqola’aanta, Stadin osaamiskeskus iyo laamaha dowlada magaaladda ee ka shaqeeyo arimaha ajaanibta.
Adeegga Stadin osaamiskeskus waxa uu wada shaqeeyaa ashkhaasta shaqo la’aanta ahi iyo kuwa halis ugu jiro in ay shaqada ka dhammaato.
Ahmiyadda adeegga waa in muddada safmarka caabuqa korona loo soo bandhigo ajaanibta reer Helsinki adeegyo ka caawinayo shaqo helista, waxbarasho helista iyo isu diyaarinta shaqo ama waxbarasho.
” Stadin osaamiskeskus, waxay doonaysaa in ay mas’uuliyaddeeda qaado waxqabadkeedana horumariso, si ay u fududeyso in dadka shaqo la’aanta ah ay xittaa xilliyada gaarka ah ugu wareegaan shaqo iyo waxbarasho. Marka aan sidan sameyno, waxaan dhankeena ka fududaynaynaa shaqada faraha badan ee saraakiisha Xafiiska Shaqada iyo Meherada macaamiisheenana waxaan inta lagu jiro xaaladda gaarka ah u suurragelinaynaa billaabista tubta shaqada iyo waxbarashada”, sidaas waxaa sheegay agaasimaha Stadin osaamiskeskus Frans Winstén.
Adeeggu wuxuu furanyahay maalmaha shaqada wuxuuna shaqeynayaa illaa iyo wakhti aan la cayiman ama illaa iyo inta uu safmarka fayruska Korona ka yaraanayo.
Hal telefoon ayaa adeegyada laga helayaa
Waxaa adeegga hagista ee Stadin osaamiskeskus la weydiin karaa talooyin ku saabsan waxbarashada iyo shaqo helista, halmar oo aad telefoonka soo wacdo ama foomka shabakadda oo aad buuxiso ayaad macaamiil uga noqon kartaa. Stadin osaamiskeskus waxay xittaa xilligan gaarka ah bixinaysaa koorasyo iyo tababarro.
“Waxaan lafagguraynaa aqoonta macaamilka, waxaan macaamiilka si shakhsi ah ula qorshaynaynaa sida uu ku gaarayo nolosha shaqada ama waxbarashada, wareysiga shaqadana waan u tababaraynaa. Waxaan sidoo kale wada eegaynaa CV:ga macaamiilkeena iyo dukumentiyada kale ee shaqo raadinta la xiriira,” Ayuu Winstén hadalkiisa ku sii daray.
Nidaamka hawleed sida fudud lagu geli karo waxaa ala qorsheeyay maamulka Xafiiska Shaqada iyo Meherada, xarumaha Stadin osaamiskeskus ee aagga caasimadda iyo weliba qolyaha magaalooyinka u qaabilsan u soo guurista dalka. Nidaamka hawleed kan lamid ah ayaa ka shaqeeya dhammaan Stadin osaamiskeskus ee aagga caasimadda.
Adeegga Stadin osaamiskeskus wuxuu furanyahay maalmaha isniin illaa iyo jimce, saacadaha u dhexeysa 9-15 ku shaqeynayaa lambarkan telefoonka 09 3102 8705. Wicitaanka lambarkan waa lacag la’aan. Adeegga waxa uu ku baxayaa luqadaha finnishka iyo ingiriiska. Sida ugu macquulsan ayaa loogu dadaalayaa in lagu siiyo adeeg luqadadaada ku baxaya. Adeegga waxaa loogu talagalay ajaanibta reer Helsinki.
Adeegga waxaa sidoo kale la isaga diiwaangelin karaa qaab elegtroonig ah.
Halkan iska diiwaangeli